Booska Hordhaca Ah Ee Carwada Ganacsiga
Booska Hordhaca Ah Ee Carwada Ganacsiga Qaab dhismeedka hordhaca ah oo loo yaqaan '1900m2' ayaa loo baahnaa, ka hor inta aysan booqdayaashu sahamin 145 nooc oo caalami ah oo ka dhex shaqeeya Salon de TE. Si loo qabto aragtida booqdaha ee qaab nololeedka raaxada iyo jaceylka “Deluxe Train Journey” waxaa loo soo saaray fikradda ugu weyn. Si loo abuuro riwaayad soo-dhoweynta qolka soo-dhoweynta ayaa loo beddelay mawduuc xarun maalinle ah oo mawduuca lagu buuxiyo iyadoo la dhigayo goobta hoolka tareenka fiidkii ee fiidkii hore oo leh daaqado tareenno xajmi ahaan u badan oo sawirro muuqaallo ah ka hadlaya. Ugu dambeyntiina, garoon hawleedyo badan oo shaqeynaya oo leh marxalad ayaa u furmey bandhigyada kala duwan ee sumadda leh.
Soo Jiidashada Dalxiisku
Sabti 14 Bisha Shanaad 2022
Soo Jiidashada Dalxiisku Qalcad jacaylka dabayshu waa degsiimada qarnigii 20aad oo degen 10 acres oo muuqaal u dhaw tuulada Ravadinovo, aag ku taal badhtamaha buurta Strandza. Booqo oo ku raaxayso uruurinta caanka ah ee adduunka, qaab dhismeedka xiisaha leh iyo sheekooyinka qoyska dhiirrigeliya. Ku raaxayso jardiinooyinka qurxinta leh, ku raaxeyso dhul duurka ah iyo socod lugeedka balliyada oo aad dareento niyadda sheekooyinka.
Soo Jiidashada Dalxiisku Castle waa mashruuc gaar loo leeyahay oo la bilaabay labaatan sano ka hor 1996dii riyo laga soo bilaabo caruurnimadiisii si loo dhiso Castle u gaar ah, oo la mid ah sheekooyinka sheekooyinka. Naqshadeeyahu sidoo kale waa naqshadeeye, dhisme iyo naqshadeeye muuqaalka muuqaalka. Fikradda ugu weyn ee mashruuca ayaa ah in la abuuro meel lagu madadaalo qoyska, sida soo jiidashada dalxiiska.
Khamiis 12 Bisha Shanaad 2022
Hudheel Huteelkani wuxuu ku yaalaa darbiyada Dai Temple Dai, hoosta Mount Mount. Ujeeddada naqshadeeyayaashu waxay ahayd inay beddelaan naqshadda hudheelka si ay u siiyaan martida deggenaansho deggan oo deggan, isla mar ahaantaana, u oggolaata martida inay la kulmaan taariikhda iyo dhaqanka u gaarka ah magaaladan. Adigoo adeegsanaya qalabyo fudud, codad khafiif ah, iftiin jilicsan, iyo farshaxan si taxaddar leh loo doortay, booska ayaa muujinaya dareenka taariikhda iyo casriga labadaba.
Qalabka Fududeeyaha Ee Loo Yaqaan 'forklift Operator'
Qalabka Fududeeyaha Ee Loo Yaqaan 'forklift Operator' Qalabka fududeeyaha forklift ee ka shaqeeya Sheremetyevo-Cargo waa mashiin qaas ah oo loogu talagalay tababarka darawallada baabuurta ee loo yaqaan 'forklift training' iyo hubinta shahaadooyinka. Waxay matalaysaa qol leh nidaam kontorool, meel fadhiga iyo shaashad shaashad isku laabma. Shayga ugu muhiimsan ee jirka jirku waa bir; sidoo kale waxaa jira walxo caaga ah iyo dusha sare ee ergonomic oo laga sameeyay xumbo polyurethane isku-dhafan.
Ballo Hadalka La Qaadan Karo Jimco 27 Bisha Shanaad
CATINO Qolka Musqusha Khamiis 26 Bisha Shanaad
Temple Keegga Keega Arbaco 25 Bisha Shanaad
Booska Hordhaca Ah Ee Carwada Ganacsiga Soo Jiidashada Dalxiisku Soo Jiidashada Dalxiisku Wax Soo Saarka Waxbarashadu Hudheel Qalabka Fududeeyaha Ee Loo Yaqaan 'forklift Operator'